anish ali – Page3– अनलाइन खबर
No Comments on वाह ! क्या कला रहेछ प्रधानमन्त्रीको, पहिलो पटक खुल्यो रहस्य (फोटो फिचर)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखान टुक्का मिसाएर भाषण गर्न कहलिएकै नेता हुन् । तर उनको अर्को तारिफ गर्न योग्य खुवी आज सार्वजनिक भएको छ । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले हिजो बिहीबारदेखि गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चित्रकला प्रस्तुत गरे । उद्घाटनको औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि व्यापार मेला अवलोकन गर्दै गर्दा मेलास्थलको एक छेउमा राखिएको रेखाचित्र बोर्डमा प्रधानमन्त्रीलाई केही लेखिदिन अनुरोध गरियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुची लिएर रंग थालीमा चोभे । […]
No Comments on बालकृष्ण ढुंगेलकी छोरीले भनिन् ,कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पनि मेरो बाबा जेल बस्नुपर्ने?
आज पनि सोध्न मन लाग्छ, बालकृष्ण ढुंगेल जेल बस्नुपर्ने तर अरू छाती चौडा गरेर घुम्ने, यो कस्तो गणतन्त्र हो ?’ उनको प्रश्न त्यतिमै रोकिएन, ‘देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ । गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ । तर त्यही गणतन्त्रका लागि लडेका एउटा योद्धा जेलमा छन् । यो कस्तो गणतन्त्र हो ? कहाँ छ गणतन्त्र ?’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जेल सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेलद्वारा लिखित गीति एल्बमको विमोचन कार्यक्रममा उनकी जेठी छोरी विनिताको प्रश्न हो यो । ढुंगेल केन्द्रीय कारागारमा जेल सजाय […]
विदेश जाने क्रममा श्रीमतीले चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति गर्न दिए यस्तो उपहार
No Comments on विदेश जाने क्रममा श्रीमतीले चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति गर्न दिए यस्तो उपहार
काठमाडाैं । यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुन सक्छ । तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ । चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि सेक्स टोयको माग बढ्दै छ । करिब चार महिनाअघिको कुरा हो । धनगढीकी सुविना (नाम परिवर्तन) ले काठमाडौंस्थित सेक्स […]
यस दिन जादै छन् भारतीय भ्रमणमा, जान साथि मादी संग नभेट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई
No Comments on यस दिन जादै छन् भारतीय भ्रमणमा, जान साथि मादी संग नभेट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई
काठमाडौं ९ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ चैतमा भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ । भ्रमण तीन दिन अर्थात् २५ गतेसम्म हुनेछ । दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक गृहकार्यपछि ओलीको भ्रमण मिति तय भएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच २४ चैतमा हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुने बताइएको छ । सोही दिन ओलीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति वैंकया नायडुसहित भारतीय उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको […]
तीन मन्त्री थापेर आज क्याबिनेट विस्तार हुदै,मन्त्रीको सपथ खाने यी हुन् तीन जना
No Comments on तीन मन्त्री थापेर आज क्याबिनेट विस्तार हुदै,मन्त्रीको सपथ खाने यी हुन् तीन जना
प्रदेश नम्बर ४ को मन्त्रीपरिषद् आज विस्तार हुँदैछ। मुख्‍यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकले दिउँसो ३ बजेका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठक बलाएका छन्। ७ मन्त्रालय पाएको प्रदेश ४ मा चार जनाको मन्त्रीपरिषद् बनिसकेको छ। बाँकी तीन जना मन्त्री बन्दैछन्। नयाँ मन्त्री बन्‍नेमा पर्वतका सांसद विकास लम्साल, नवलपुरका रोशन गाहा मगर र म्याग्दीकी नरदेवी पुनको नाम मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरका छन्। लम्साललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, गाहा मगर सामाजिक विकास मन्त्री र पुन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बन्‍न लागेका हुन्। उद्योग मन्त्रालय […]
रेखाले लेखिन् ऐश्वर्यालाई भावुक चिठी , के अमीताभ जोडिएका छन चिट्ठीमा ?
No Comments on रेखाले लेखिन् ऐश्वर्यालाई भावुक चिठी , के अमीताभ जोडिएका छन चिट्ठीमा ?
बलिउडकि चर्चित अभिनेत्री रेखाले अहिलेका अभिनेत्रीलाई निकै प्रेम गर्छिन् । चाहे दीपिका पादुकोण हुन् या विद्या बालन या त सोनम कपुर नै किन नहुन् । उनीहरु सबैलाई रेखाले प्रेमले हेर्छिन् । रेखा सधैँजसो अभिनेत्रीहरुको प्रंशसा गरिरहन्छिन् । उनीहरुलाई अगाडि बढ्न हौसला दिइरहन्छिन् । उनले फेरि एकपल्ट यो भावना प्रदर्शन गरेकी छन् । ऐश्वर्याले अभिनय क्षेत्रमा दुई दशक पूरा गरेको उपलक्ष्यमा रेखाले एक भावुक पत्र लेखेकी छन् । रेखाले ऐश्वर्यालाई सानदार यात्राका लागि शुभकामना दिएकी छन् । खास कुरा […]
भर्खरै बिमानस्थल बाट आयो लाजमर्दो खबर
No Comments on भर्खरै बिमानस्थल बाट आयो लाजमर्दो खबर
मुलुकको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बेला बेला ठूला भन्दा ठूला लापरवाहीका घटनाहरु हुने गरेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण यूएस बंगला विमान दुर्घटनाको समयमा पनि देखिएको छ । दुर्घटना हुँदासाथ विमान जलीरहेको स्थानमा समयमा वारुण यन्त्र नपुग्नु, पछि सर्वसाधारण नै पर्खाल नाघेर दुर्घटनास्थलमा पुग्नु लगायतका चरम गल्तीहरु गरेर विमानस्थलले आलोचना खेपीरहेका बेला मंगलबार पनि विमानस्थलमा हद पार गरेर कर्मचारीहरुले अर्को पराकाष्ठा देखाएका छन् । जुन गल्तीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘छड्के’ जाँच गर्दा रंगेहात पक्राउ […]
यी युवतीसंग २० मिनेट यौनसम्पर्क गर्न पाइन्छ, थालिन युवतीले नेपाल सहित हरेक देशका पुरुषसँग सम्भोग
No Comments on यी युवतीसंग २० मिनेट यौनसम्पर्क गर्न पाइन्छ, थालिन युवतीले नेपाल सहित हरेक देशका पुरुषसँग सम्भोग
उद्देश्य के लिनु ? उडि छुनु चन्द्र एक भन्ने गरिन्छ हामी कहाँ । तर पोल्याण्डकी एक युवतीले भने उडेर चन्द्रमा छुने भन्दा पनि अझै कडा जस्तो लाग्ने उद्धेश्य लिएकी छिन् । २१ वर्षकी ती युवतीले आफ्नो जिवनकालमा १ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य लिएकी छिन् । उनले आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम सुरुवात गरिसकेकी छिन् र अहिलेसम्म केही संख्यामा पुरुषहरुलाई आफ्नो यौनको चपेटामा पारिसकेकी छिन् । एनिया लिसेवस्का नामकी ती युवती आफ्नो यो लक्ष्य पूरा […]
बंगलादेशका मन्त्रीले गरे ओलीको तारीफ नेपालसँग बंगलादेशले गर्यो यति ठुलो प्रस्ताव
No Comments on बंगलादेशका मन्त्रीले गरे ओलीको तारीफ नेपालसँग बंगलादेशले गर्यो यति ठुलो प्रस्ताव
सोनीका रोकाया/युट्युबर तथा मोडल हिजोआज प्रेमसम्बन्ध हुनेहरूले पनि बेग्लै यौन साथी बनाएका हुन्छन् । खासगरी डिभोर्सको कारण पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ । मानिसहरूले जब यौनसम्बन्धमा नयाँ फ्लेबर खोज्न थाले, त्यसपछि घर भाँडिने घटनाहरू बढ्न थाले, तर स्वस्थ यौन व्यवहारले स्वास्थ्यलाई फाइदै हुन्छ । अहिलेको पुस्ताले प्रेम गर्दा यौनको स्वाद पनि सँगै लिइरहेको हुन्छ । म लेखेरै दिन्छु, काठमाडौंमा बस्ने अधिकांश केटाकेटी भर्जिन छैनन्, किनभने सबैमा यौनको चाहना हुन्छ । यौनसम्पर्क भएन भने मानिस पागल हुन्छ । हरेकलाई यौनसाथी चाहिन्छ नै । प्रेममा यौन जरुरी […]
यी चार कारण महिलाहरू कण्डम लगाएर सेक्स गर्न रूचाउदैनन्
No Comments on यी चार कारण महिलाहरू कण्डम लगाएर सेक्स गर्न रूचाउदैनन्
जान्नु आवश्यक छ कि सेक्स जहिले पनि सेफ रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि । असुरक्षति यौनका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा कण्डमको प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ । सेफ सेक्सका लागि कण्डम भरपर्दो अस्थायी साधान समेत मानिन्छ । यसले विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउन समेत मदत गर्छ । तर, धेरे महिलाहरुलाई कण्डमको प्रयोग गर्न मनपर्दैन । यसका केही कारणहरु रहेका छन् । चरम सुख मिल्दैन केही युवतीहरुका अनुसार कण्डम लगाएर सेक्स गर्दा चरम आनन्द मिल्दैन । यसै कारण उनीहरुलाई […]